Taratasy vita amin'ny silipo vita amin'ny silika ho an'ny mpamokatra sy mpamatsy lasantera Solar | Cayce Mey
Ny kalitao dia fiainan'ny orinasa iray. Ny orinasa dia manome lanja lehibe ny fifehezana ny kalitaon'ny vokatra. Izy io dia manana vondrona mpiasan'ny kalitao matihanina, miaraka amin'ny laboratoara vokatra matihanina, efitrano fitiliana ary laboratoara. Mandritra ny fizotry ny famokarana, dia manaraka ny famokarana manara-penitra sy mampiala voly tanteraka ny firenena sy ny indostria. Ny fenitra sy ny fenitry ny orinasa ahafahan'ny vokatra mahafeno ny fepetra takian'ny mpampiasa. Ny vokatra avy amin'ny Caycemay Company dia misy ny karazan'asa rehetra novokarin'ny olona eraky ny firenena, ary ny vokatra sasany dia lasa any ivelany sy manerantany. Ny ambaratongam-pamokarany, ny kalitaony, ny vidiny, ny fandefasana azy ary ny serivisy dia nahazo fiderana avo avy amin'ny mpanjifa ary nankafy laza malaza.
Ny vokatr'ilay orinasa dia mikendry vokatra avo lenta, ary ezahina handevona sy hisoka ny haitao avy any ivelany hanoloana ny fanafarana entana sy hampiakarana ny taha-toerana. Ny tarpaulin-maharitra ela ho an'ny fiara fitaterana dia natolotra ho an'ireo orinasa vahiny. Ny ravin-silika dia mitana ny antsasaky ny saha amin'ny laminatoran'ny masoandro, vera, hazo, tsihy karatra sns; fitaovana fanamafisam-peo vita amin'ny fingotra ao amin'ny indostrian'ny petrochemical no nahazo laza malaza;
Taratasy vita amin'ny silipo vita amin'ny silipo ho an'ny laminatoran'ny masoandro, ravin-tsolika mahazaka ranomaso avo lenta Caycemay dia mampiasa fitaovana marika malaza eran'izao tontolo izao, haitao mihantona mandroso ary famokarana tsipika fanangonana fitaovana manokana, ny vokatra dia manana fahamarinan-toerana avo sy azo ianteherana tsara, ary ampiasaina amin'ny laoniny ho an'ny laminatoran'ny masoandro, sns. fitaovana
Ity vokatra ity dia manolotra ireo fitaovana nohamafisina miaro ny tontolo iainana tsy mahazaka asidra, mahazaka antonony, mahazaka hafanana avo lenta ary fitaovana manokana momba ny tontolo iainana mifototra amin'ny tabilaon'ny gel silika malala-java-boahary. Amin'izany, ny tanjaka mihombo, ny tanjaky ny ranomaso ary ny fahamarinan-toeran'ny lozisialy silika dia mihatsara fatratra, ary maharitra ny androm-piainan'ny vokatra.
Manana tombony ihany koa izy fa rehefa ampiasaina amin'ny fetrany ny ravina vita amin'ny fingotra dia tsy hiteraka fahasimbana amin'ny maodelin'ny sela masoandro izany. Ny sakan'ny ambony indrindra dia mety hahatratra 4000mm tsy misy zaitra.
Hardness (Shore A) 60 ± 2
Herin'ny ranomaso Mpa≥ 10.5
Herin'ny ranomaso N / mm≥ 40
Fanoherana ny maripana ℃ 200
EVA mahatohitra (ampitahaina) tsara
Teo aloha: Silicone Rubber Cushion Ho an'ny Card-laminator
Manaraka: Takelaka vita amin'ny silika vita amin'ny silipo ho an'ny indostria fitaratra